Falanqeynta Sunderland V Manchester United” Van Gaal oo lawada Eegayo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Falanqeynta Sunderland V Manchester United” Van Gaal oo lawada Eegayo
Falanqeynta Sunderland V Manchester United” Van Gaal oo lawada Eegayo
Sunderland ayaa garoonkeeda ku soo dhoweyn doonta Manchester United,kulan ka tirsan Premier League-ga,iyadoo cayaartan ay adkana doonto.
Adam Johnson oo qirtay inuu la seexday gabar 15 jir ah ayaa lag buriyay Sunderland, halka Jeremain Lens, Younes Kaboul iyo Duncan Watmoreay dhaawacyo ku maqnaan doonaan. Billy Jones ayuuse shaki ku jiraa, laakiin Fabio Borini ayaa kasoo kabtay Virus.
Guillermo Varela, Phil Jones iyo Adnan Januzaj ayuu dhaawac kasoo gaaray iyagoo u dheelayay kooxda 21 jirada,- Will Keane ayaa lagu soo daray shaxda koowaad,kadib markii uu soo bandhiggay qaab cayaareed sare.
Bastian Schweinsteiger, Luke Shaw, Marcos Rojo, Antonio Valencia iyo Ashley Young ayaa sidookale seegi doono kulankan Sunderland.
Maxay macallimiintu ka yiraahdeen kulanka?
Sam Allardyce-ka Sunderland: “Waxaan u baahanahay inaan dagaal culus la galno Man United, guul aan gaarno waxaa fure u ah Jermain Defoe.- Waa xaqiiqo inaan dhibaato ku jirno,hase ahaatee, taas nooma diideyso inaan ka badino koox weyn”.
Louis van Gaal-ka Manchester United: “Waxaan dooneynaa inaan sare u qaadno qaab cayaareedkeena, waxaan dagaal ugu jirnaa kaalmaha sare ee horyaalka”.
Manchester United ayaa keliya hal jeer guul-darro kala kulantay Sunderland 27-kii kulan ee ugu dambeeyay oo league-ga ah: 20 guul iyo 6 bar-barro.
Sunderland ayay ugu dambeysay 1997-dii inay kulan Premier League-ga ah guul kaga gaarto Man United, markaasna waxay ku awood roonaatay 2-1.
Si waliba,Sunderland ayaa 2014-kii garoonkeeda Light lugtii kowaad ee semi-finalka League Cup-ka kaga soo badisay United.
Sunderland ayaa wax guul ah gaarin 4 kulan oo league-ga ah: 2 bar-barro iyo 2 guul-darro,sidookale 1 jeer ayay guul gaartay 5-tii kulan ee ugu dambeysay ee ay ku cayaartay garoonkeeda. 1 bar-barro iyo 3 guul-darro.Laacibiin.com ayaa kusoo koobtay xogtan.
Kooxda macallin Sam Allardyce ayaan shabaqeeda ilaashanin 11-kii kulan ee ugu dambeeyay oo league-ga ah.
Jermain Defoe ayaa 6 gool dhaliyay 6-dii kulan ee ugu dambeysay ee uu Sunderland u saftay Premier League-ga.
Manchester United ayaa guul soo gaartay 1 jeer, 6-dii kulan ee ugu dambeysay oo safartay. 3 bar-barro iyo 2 guul-darro.
3 jeer oo keliya ayay Man United guul gaartay 12-kii kulan ee ugu dambeeyay League-ga ah: 5 bar-barro iyo 4 khasaare.
Kooxda Louis van Gaal ayaa 12 jeer shabaqeeda ilaashatay xilli cayaareedkan,waxayna bareejo la tahay Arsenal.
Wayne Rooney ayaa ku lug yeeshay 6 gool oo Premier League-ga ah, sanadda 2016-ka, 5 gool iyo 3 caawinaad ayuu sameeyay.taas baddelkeeda, 2015-kii oo dhan, 33 kulan oo Premier League-ga ah ayaa waxaa uu dhaliyay 6 gool, sidookalena caawiyay 2 jeer.
Marouane Fellaini ayaa safan karo kulankiisii 200-aad ee Premier League-ga.
Previous articleDHAGEYSO: Barnaamijka Muuqaalka maanta 13-02-2016
Next articleFalanqeynta Kulanka xiisaha leh ee Chelsea V Newsvastle